यस्तो जीवनसाथी, जसले सधैं खुशी दिन्छ | सुदुरपश्चिम खबर
दाम्पत्य जीवन कसरी सुखमय बन्छ ? कसरी उनीहरुलाई खुशी र आनन्द मिल्छ ? किनभने कतिपय दाम्पत्य सम्बन्ध त्यति प्रेमिल हुँदैन । उनीहरुबीच विश्वास र प्रेमको अभाव हुन्छ । त्यही कारण यस्तो दम्पतीबीच मनमुटाव एवं कलह भइरहन्छ ।
त्यसैले दम्पतीबीचको सम्बन्ध प्रेमिल र विश्वासले भरिपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ । जब दम्पती खुसी हुन्छन्, त्यसको सकारात्मक प्रभाव उनीहरुको घर परिवारमा पर्छ । यसले घरलाई नै स्वर्ग बनाउँछ । दम्पतीबीच सुख र खुसी चाहिँ के कुराले ल्याउँछ ?
हरेक कुरामा उत्तरदायी एवं जिम्मेवार बोध गर्नुपर्छ । परिवार वा श्रीमान्÷श्रीमतीका खातिर आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व के हो ? बुझ्नुपर्छ ।
धेरै गंभीर वा संवेदनशील हुँदा पनि आपसी सम्बन्ध राम्रो हुँदैन । जीवनलाई सरल रुपमा लिने र साधरण हिसाबले जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । परिवारमा रमाइलो माहौल बनाइराख्नुपर्छ । सानो प्राप्तिमा खुसी हुने, रमाउने बानीको विकास गर्नुपर्छ । ख्यालठट्टा, मनोरञ्जनलाई जीवनको एउटा हिस्सा बनाउनुपर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)